दैलेख एमालेका ५३ मध्ये पाँचजना वडाध्यक्ष मात्रै नेकपा एसमा, केहि आज जाँदै – Nepal Press
दैलेख एमालेका ५३ मध्ये पाँचजना वडाध्यक्ष मात्रै नेकपा एसमा, केहि आज जाँदै
२०७८ भदौ २० गते ८:०७
सुर्खेत । नेकपा एमालेको मुख्य प्रभावक्षेत्रमध्येको एक दैलेख जिल्लामा नेकपा एमालेबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ५३ वडाअध्यक्षमध्ये जम्मा पाँच वडाअध्यक्ष मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गर्न जिल्ला निवर्पाचन आयोग दैलेख पुगेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टीमा जाने हो भने सनाखत गर्नका लागि भदौ २२ सम्मको समयसीमा दिएको छ । दुई दिन समय बाँकी रहेकाले थप केहि जनप्रतिनिधि नेकपा एसमा जाने सम्भावना छ ।
११ स्थानीय तह रहेको दैलेखमा ९० वडा छन् । तीमध्ये एमालेले ५२, कांग्रेसले ३३, नेमकिपाले तीन र राप्रपाले एक वडाअध्यक्ष जितेका थिए । एक वडाअध्यक्षले स्वतन्त्र जिते पनि एमालेमै प्रवेश गरेपछि एमालेको वडाअध्यक्षको संख्या ५३ पुगेको थियो ।
११ मध्ये सात स्थानीयत तहको प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । एमालेले विजय प्राप्त गरेको पालिका मध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकको महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी बुढा, वडा नं. ४ का देव बहादुर शाही, पाँचका वडा अध्यक्ष जगत बहादुर हमाल र वडा नं. ६ का डम्बर बहादुर थापाले आयोगमा गई समाजवादी पार्टीमा सनाखत गरेका हुन । अन्य वडा अध्यक्षहरु भने सनाखत गर्न गएका छैनन् ।
सोही क्षेत्रको भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापा समाजवादीमा लाग्ने भने पनि उनी सनाखत गर्न गएका छैनन् । उक्त पालिकाका उपाध्यक्ष एमालेमै रहेकी छिन् । भवगवतीमाइ वडा नं. दुइ का कर्ण बहादुर शाही मात्र नयाँ दलमा सनाखत गर्न गएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर थापाका अनुसार उनीसँगै वडाअध्यक्षहरु कृष्णबहादुर थापा, कृष्णबहादुर शाही, वीरशंकर रोकायाले आज सामाजवादी दलमा सनाखत गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यहाँ पालिका उपाध्यक्ष र एक वडाअध्यक्ष मात्रै एमालेमा लाग्ने पक्का भएको छ ।
नारायण नगरपालिकामा एमालेले ८ वडा जितेको थियो । नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्कासहित अधिकांश वडाअध्यक्ष एमालेमै छन् । दुइ जना वडाअध्यक्ष ढुुलमुल रहेको भनिए पनि हालसम्म वडा नं. तीनका वडाअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद शर्माले मात्रै सनाखत गरेका छन् ।
नारायण नगरपालिकामा तीर्थनारायण श्रेष्ठ, चन्द्रप्रसाद शर्मा, रेशम थापा, वीरबहादुर कटुवाल, लालबहादुर थापा, ढालबहादुर थापा, लोगबहादुर थापा र टंकबहादुर विष्ट अध्यक्ष रहेका छन् । नगरउप्रमुख सावीत्रि मल्लले भने नयाँ दलमा सनाखत गरिसकेकी छन् ।
गुराँस गाउँपालिकामा एमालेले चार वडा जितेको छ । ती सबै एमालेमै रहने निश्चित भएको छ । वडाअध्यक्षहरु खड्क शाही, हिम ओली, पूर्ण विसी, नरबहादुर रामजाली एमालेमै रहने भएका छन् ।
डुंगेश्वर गाउँपालिकामा एमालेले दुइ वडामा विजय प्राप्त गरेको छ । जसमा लोकबहादुर डाँगी र राजु केसी छन् । ती दुवै एमालेमै रहने बताइएको छ ।
नौमुले गाउँपालिकामा गजबहादुर डेंगा हालसम्म कतै खुलेका छैनन् । अन्य भवानी शर्मा र मोहन शर्मा एमालेमै रहने निश्चित भएको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ मा समाजावादीमा जानेको संख्या न्यून
दुल्लु नगरपालिकाका उपप्रमुख एमालेमै छिन् । उक्त पालिकाबाट वडा नं. ९ का रनबहादुर बोहोरा मात्रै नयाँ पार्टीमा गएका छन् ।
दुल्लुमा नेकपा एमालेकातर्फबाट वडा नं. २ मा लक्षीराम थापा, ३ मा कलम खनाल, १० मा हर्कबहादुर खड्का, ११ मा खगेन्द्र थापा, १२ मा झुपाराम लम्साल र १३ मा भिमबहादुर शाही एमालेमै छन् ।
भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बुढासहित एमालेबाट निर्वाचित सबै वडाअध्यक्ष एमालेमै छन् । कासीराम शर्मा, वीरेन्द्रबहादुर शाही, छविराम आचार्य, हरि बहादुर थापा एमालेमै रहेका हुन ।
चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख तारा शाहीमात्रै समाजवादीमा लागेकी छिन् । नगरप्रमुख सुर्यबहादुर शाही, वडाअध्यक्षहरु रंग तामाङ, जंग विष्ट, टिकाराम शाही, बखत बोहोरा, वीरबहादुर शाही र नन्दप्रसाद न्यौपाने एमालेमै रहेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरु सनाखत गर्नकालागि आयोगमा गएका छैनन् ।
ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुस्मीता सिंह नयाँ पार्टीमा लागेकी छिन् । अध्यक्ष धीरबहादुर शाही, वडाअध्यक्षहरु नरतम बुढा, रुपलाल विश्वकर्मा, कर्णबहादुर शाही, रमेश सिजापती, मनबहादुर सिजापती एमालेमै रहेका छन् ।
र आठबीस नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्याय पनि एमालेमै छन् । चार वडा जितेको एमालेले त्यहाँबाट कोही पनि समाजवादी पार्टीमा गएका छैनन् । उक्त नगरपालिकाबाट पर्वसिंह विश्वकर्मा, प्रयाग शाही, रणबहादुर माझी र कर्णबहादुर आले एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए ।
प्रकाशित: २०७८ भदौ २० गते ८:०७